जग्गाधनी आफैले जग्गा बेचेको खुलासा, औँठा छाप प्रमाणित हुँदै ? – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । ५ माघ २०७७, सोमबार १०:२७ मा प्रकाशित
4513 पटक हेरिएको
सुर्खेतमा केही दिनदेखि मालपोत कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा धनीलाई नै थाहा नै नदिई जग्गा बिक्री गरेका समाचारले भाइरल भएको छ । तर बास्तविकता भने अर्कै रहस्य पाइएको छ । वीरेन्द्रनगर–६ का जग्गा धनी सौगात रावतले स्वयम् आफैले जग्गा बिक्री गरेको प्रमाण फेला परेको छ ।
जग्गाधनी रावत आफै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भई राजीनामा दिएको प्रमाण भेटिएको हो । मालपोत कार्यालय २०७७ असार ८ गते रावत आफैले जग्गा विक्री गरेको प्रमाण भेटिएको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार रावतले मालपोत कार्यालय सुर्खेतको कम्प्युटर फाँटमा स्वयम् उपस्थित भई डिजिटल औँठा छाप, रुजु र स्थलगत फोटा खिचेर जग्गा राजीनामा गरेको मालपोत कर्मचारी स्रोतको दावि छ । जग्गाधनीकै औँठा छाप, दस्तखत हो वा होइन प्रमाणित गर्नका लागि प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आवश्यक कागजात पठाएको छ ।
रावतको अनलाईन फोटो र आँैठा छाप हाल नेपाल सरकारले सुरु गरेको डिजिटल प्रविधिको सिस्टम प्रविधिमा सुरक्षित छ । तर जग्गा बिक्रीकर्ता रावतले भने आफूलाई थाहै नदिई जग्गा बिक्री गरेको भन्दै मालपोतका कर्मचारी विश्वरुप साउँदलाई पुस २९ गते साँझ आफ्नै गाडी लिएर प्रहरीलाई बुझाएका मालपोत कार्मचारीको भनाई छ ।
रावतले जग्गा विक्री गर्नका लागि असार ८ गते वडा नं. १३ को वडा कार्यालयबाट जग्गा राजीनामा स्विकृति पत्रको साथमा मालपोत कार्यालय पुगेका थिए । सोही दिन नै रावतले साविक जर्बुटा ३ (क) र कित्ता नं. ३१११ र १२३७.२० बर्ग मिटरको जग्गा मध्येबाट सहबिर कार्कीलाई ८०७ बर्ग मिटर कित्ता काट गरेर बिक्री गर्न स्विकृत दिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
सहबीर कार्की साविक दैलेखको महाबु गाउँपालिका वडा नम्बर–३ बाँसी स्थायी घर भई हाल वीरेन्द्रनगर–१ मा बस्छन् । रावतले फाष्टट्याकमार्फत असार ८ गते नै जिल्ला नापी कार्यालय सुर्खेतमा उपस्थित भई उल्लेखित कित्ताबाट ३१११ बाट २२६९ कित्ताबाट कार्कीलाई जग्गा बिक्री गरेको भेटिएको छ । उक्त जग्गा सुरुमा वीरेन्द्रनगर–१ कार्कीको नाममा नामसारी भएको पाइएको छ ।
मालपोत अभिलेखमा कार्कीको नाममा जग्गा पास हुँदा वीरेन्द्रनगर–४ का नारायण बुढा र वीरेन्द्रनगर–१ का चाँदनी वली साक्षी बसेको देखिन्छ । कार्कीका नाममा १० असार २०७७ पछि ६ कित्तामा बाँडेर अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको छ । हाल उक्त जग्गा कित्ताकाट भई नियम अनुसार अन्य ६ जनाको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।
बाँकी जग्गामध्ये कित्ता नं. ३३७० को २८५ बर्ग मिटर र कित्ता नं. ३३७१ को १०७५.२० बर्गमिटर भने रावतले आफ्नै नाममा राखेको देखिन्छ । यी सबै तथ्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने जग्गा धनी सौगातले जानीबुझि जग्गा बिक्री गरेको प्रमाणित हुन्छ । रावत यसअघि सुर्खेतमा जग्गाको कारोबार गर्दै आएका व्यक्ति भएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन ।
मालपोतको सक्कल फाइल प्रहरीसँग
यता जग्गा खरिद बिक्रीको आधिकारीक फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत लिएको छ । आधिकारिता बुझ्ने भन्दै प्रहरीले जग्गाको राजीनामा सक्कल मिसिल नै लिएको हो । मालपोत कर्मचारीहरुले जग्गाधनीकै उपस्थितिमा राजिनामा गएको दावि गरेका छन् भने जग्गाधनीले आफुलाई जानकारी नै नदिएर मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिद विक्रि भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरीले आइतबार अनुसन्धानको लागि भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेत र नापी कार्यालय सुर्खेतबाट माग गरेको थियो । फाइल मागेपछि मालपोत कार्यालयले सक्कल फाइल नै प्रहरीलाई बुझाएको हो । मालपोतले सक्कल फाइल नै प्रहरीलाई बुझाउनु संकास्पद देखिन्छ । तर नापी कार्यालय सुर्खेतले प्रहरीलाई प्रमाणित प्रतिलिपि मात्रै उपलब्ध गराएको छ । मालपोत कार्यालयले पनि प्रमाणित प्रतिलिपि दिनसक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सक्कल फाइल प्रहरीको हातमा दिनुले घटना थप रहस्यमय बन्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । यता सक्कल फाइल प्रहरीलाई दिएको विषयमा बुझ्न खोज्दा मालपोत कार्यालयले भने फोन सम्पर्क हुन सकेन गरेन् ।
कोरोनाको सन्त्रासमा जग्गा खरिदकर्ता र विक्रिकर्ताले माक्स प्रयोग गरेकाले जग्गाधनी सक्कली परेकी नक्कली स्पष्ट हुन गाह्रो भएको मालपोत कार्यालय फाँटवाला कर्मचारीहरुको भनाई छ । उक्त जग्गा खरिद, विक्रिको मिसिल, औठा छाप, फोटोदेखि सबै महत्वपूर्ण कागजात जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मालपोत कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएका कागजातको औँठा छाप स्वयंम जग्गाधनीको हो वा होइन प्रमाणित गर्नका लागि प्रविधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौं पठाइएको प्रहरीको भनाई छ । विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रमाणित रिपोर्ट आएपछि जग्गाधनी सक्कली वा नक्कली के हुन प्रमाणित हुने जनाइएको छ ।
जग्गा बिक्रीकर्ता रावत र जग्गा खरिदकर्ता कार्कीबीच भएको जग्गा लेनदेनमा जग्गा खरिदकर्तालाई किटान नै नगरी सोझै कर्मचारीलाई आरोप लगाउनुले पनि घटना रहस्यमय देखिन्छ । सर्वसाधारणले भने मालपोतले सक्कल फाइल प्रहरीलाई बुझाउँदा प्रहरी र आफूलाई थाहा नै नदिई जग्गा बिक्री गरेको दाबी गर्ने सौगात रावतबीच मिलेमतो भएको हुनसक्ने आँकल गरेका छन् । प्रहरी आर्थिक प्रलोभनमा परी मुद्धा बङ्गाउन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
मालपोतका कर्मचारी विश्वरुप साउँदलाई जग्गा धनी स्वयम रावतले नै पुस २९ गते साँझ आफ्नै गाडी लिएर प्रहरीलाई बुझाउनु पनि रहस्यमय देखिन्छ । सुर्खेतका एसपी राजेन्द्र भट्ट टेलिफोनमा बुझ्न खोज्दा आफूलाई पक्राउ परेको मिति ठाक्कै थाहा नभएको बताए । प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै राजीनामा मिसिल लेख्ने लेखनदास अम्बरसिं कटुवाललाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मुद्धाको प्रकृति नै फरक
जग्गा कारोबार (एजेन्ट) सन्तोष ठाकुर, लेखनदास अम्बरसिं कटुवाल र मालपोत कार्यालय सुर्खेतका नासु विश्वरुप साँवदका नाममा ठगी मुद्धा दर्ता गरिएको छ । जग्गाधनी सौगात रावतका बुवा धनबहादुर रावतले आफ्नो जग्गा थाहै नदिएर झुक्याएर अर्कै व्यक्तिका नाममा पास गरेर ठगी गरेपछि मुद्धा दर्ता गरेको बताए । जग्गा खरिदकर्ता गर्ने व्यक्तिको नाममा समेत मुद्धा आक्रर्षित हुन्छ । तर जग्गाधनीले घटनामा मुछिन आउने सबैलाई कारवाहीको भागिदार नबनाउँदा थप रहस्यमय बनेको छ ।
जग्गा धनीलाई थाहै नदिई जग्गा खरिद–विक्रि गर्नु सानो घटना होइन । यदि कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा कारोबार गरेको खण्डमा जग्गा कारोबारको मुद्धा सरकारीवादी मुद्धा हुन्छ । सरकारी छाप, फाईल, महत्वपूर्ण सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरेको खण्डमा उक्त कार्यमा संलग्न वडा कार्यालय, नापी कार्यालय हुँदै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसम्म कारवाहीको भागिदार हुन्छन् ।
जग्गाको मिसिल लेखनदासदेखि जग्गा पास गर्ने कार्यमा संलग्न नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बिरुद्ध मुद्धा लाग्छ । घटना सत्य भएको खण्डमा मुद्धाको प्रकृति जालझेली र झुक्याइएको कार्यको मुद्धा सरकारवादी हुन्छ । यदि घटना प्रमाणित भएको खण्डमा जग्गाको पासका लागि सिफारिस दिने वडा अध्यक्ष, वडा सचिव लगायत नापीका विभिन्न फाँटका कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका विभिन्न फाँटका कर्मचारी छानविनमा तानिन्छन् । लेखनदास, जनप्रतिनिधिदेखि कारोबारमा संलग्न कर्मचारी कारबाहीमा पर्छन् । तर जग्गा बिक्रीकर्ता सौगात रावतले ठगी मुद्धामा मालपोतका कर्मचारी, मिसिल लेखनदास र जग्गा कारोबारी सन्तोष ठाकुरलाई ठगीको मुद्धा दायर गरेका छन् ।
जग्गा नामसारी गर्ने कार्यको मुख्य एजेन्ट वीरेन्द्रनगर–२ भुरेली बस्ने ३२ वर्षीय सन्तोष ठाकुरको खोजी भैरहेको छ । राजिनामा लिखत तयार गर्ने लेखनदास अम्बरसिंह कटुवाल र नासु विश्वरुप साँवत प्रहरी हिरासतमा छन् । सरकारी कागजात दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख लक्ष्मी शाही, कम्प्यूटर फाँटका सुनिल राना, रजिष्टे्शन फाँटका कृष्ण थापा र दिपेन्द्र श्रेष्ठ, मोठ जग्गा नामसारी शाखाका तिर्थ महतरा, सिलका ओम बहादुर गौतमदेखि नापी कार्यालयका कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख, सिफारिस कर्ता वडा सचिवदेखि वडा अध्यक्षसम्म कारवाहीको भागिदार हुनेछन् ।
1 thought on “जग्गाधनी आफैले जग्गा बेचेको खुलासा, औँठा छाप प्रमाणित हुँदै ?”
समाचारले दुविधा बनायाे, रावतले अाफै मालपोतमा उपस्थित भएर बेचेका कार्यालयकाे भिडियो, साक्षी बसेकाहरुले बाेल्छन् हाेला अनि जग्गा किन्ने मान्छेलाई भेटेर भनाई समेट्नु पर्दथ्याे । याे पाटाे छुट्याे ।
डिजिटल फिंगर प्रिण्ट, हस्ताक्षर र फाेटाेले डिटेक्ट गरेपछि मात्र रजिस्टेशन गर्ने भएकोले अरुले किर्ते गर्न सकिंदैन ।
अाफैले राजीनामा गरेर पनि ढाँटेर कर्मचारीलाई अरु कुनै रिसिवीले फसाएकाे हाे भने जग्गाधनी साैगात रावतकाे असली सुरत देखाउनु पराे !